Atemmusɛm a ɛwɔ hɔ ma Israel (1-19)
Nokwaredi ne atɛntrenee (1-9)
Homeda ne afahyɛ ho mmara (10-19)
Ɔkae sɛ ɔbɔfo bɛkyerɛ Israel kwan (20-26)
Asaase a wobenya ne n’ahye (27-33)
23 “Nkeka nkurɔfo ho nsɛm a ɛnyɛ nokware.+ Nkɔka ɔbɔnefo ho nkodi adanse a ɛnyɛ nokware.*+ 2 Nni nnipa dodow akyi nkɔyɛ bɔne, na nnyina nnipa dodow anom asɛm so* nkodi adanse a ɛnyɛ nokware. 3 Sɛ ohiani ne obi nya asɛm na woredi asɛm no a, fa asɛm no to nea ɛda.+ 4 “Wuhu wo tamfo nantwi anaa n’afurum sɛ wayera a, fa no kɔma no.+ 5 Wokɔto sɛ obi a ɔtan wo afurum butuw hɔ a n’adesoa adɛn no so a, ntwa ne ho nkɔ. So ne mu na onyi adesoa no.+ 6 “Sɛ woredi ohiani asɛm a, hwɛ na woammu atɛnkyea.+ 7 “Hwɛ na woammoa ntwatoso. Nkum nea ne ho nni asɛm ne ɔtreneeni, efisɛ meremma ɔbɔnefo nni bem.*+ 8 “Nnye adanmude,* efisɛ nea ohu ade yiye mpo, adanmude tumi fura n’ani, na ɛma ɔtreneeni sesa n’ano.+ 9 “Nhyɛ ɔhɔho so, efisɛ moayɛ ahɔho pɛn wɔ Egypt asaase so, enti munim sɛnea ɛte.*+ 10 “Fa mfe asia dua w’asaase so aba na twa so nnɔbae.+ 11 Na afe a ɛto so ason no de, nnɔw so, gyaw ma ɛnna hɔ kwa na ahiafo nnidi asaase no so, na nea wɔn nso begyaw no, wuram mmoa bedi. Saa ara na monyɛ mo bobefuw* ne mo ngodua afuw. 12 “Fa nnansia yɛ adwuma, na da a ɛto so ason no de, nyɛ adwuma. Ɛbɛma wo nantwi ne w’afurum ahome, na w’akoa* ne ɔhɔho adwudwo wɔn ho.+ 13 “Monhwɛ nni nea maka akyerɛ mo nyinaa so.+ Mommmɔ anyame foforo din; mommma emmpue mmfi mo anom mpo.+ 14 “Afe biara munni afahyɛ mprɛnsa mma me.+ 15 Munni Paanoo a Mmɔkaw* Nnim Afahyɛ+ no. Sɛnea meka kyerɛɛ mo no, sɛ bere a mahyɛ wɔ bosome Abib*+ mu no du a, munni paanoo a mmɔkaw nnim nnanson, efisɛ bosome Abib mu na mufi Egypt bae. Ɛnsɛ sɛ obiara de nsapan ba m’anim.+ 16 Afei Otwa Afahyɛ* no, munni wɔ bere a mode twa mo afuw mu nneɛma a edi kan no mu.+ Anoboaboa Afahyɛ* no nso, munni wɔ afe no awiei, bere a moboaboa mo nnɔbae a etwa to ano fi afuw mu no.+ 17 Afe biara, ɔbarima biara a ɔwɔ wo mu bɛba abegyina nokware Awurade Yehowa anim mprɛnsa.+ 18 “Wukum aboa de bɔ afɔre ma me a, mfa biribiara a mmɔkaw wom nka mogya no ho mma me. Na srade a wode bɔɔ afɔre wɔ m’afahyɛ mu no, mma ade nnkye so. 19 “Fa w’afuw mu aba pa a wubedi kan atwa no bra Yehowa wo Nyankopɔn fi.+ “Ɛnsɛ sɛ wonoa apɔnkye ba nam wɔ ne maame nufusu mu.+ 20 “Meresoma ɔbɔfo adi w’anim+ ama wabɔ wo ho ban wɔ ɔkwan so na ɔde wo akodu baabi a masiesie no.+ 21 Tie n’asɛm na yɛ nea ɔbɛka biara. Nsɔre ntia no, na woyɛ bɔne a ɔremma womfa wo ho nni,+ efisɛ me din da no so. 22 Na sɛ wowɛn w’aso tie n’asɛm na woyɛ nea mɛka nyinaa a, mɛtan w’atamfo ani, na wɔn a wɔne w’ani nhyia no, metu m’ani asi wɔn so. 23 Me bɔfo bedi w’anim de wo akɔ Amorifo, Hitifo, Perisifo, Kaananfo, Hiwifo ne Yebusifo asaase so, na metu wɔn ase afi so.+ 24 Nkotow wɔn anyame, na mma biribiara ntwetwe wo na woankɔsom wɔn. Nyɛ nea wɔyɛ no bi.+ Mmom sɛe wɔn ahoni, na bubu wɔn abosom adum nyinaa.+ 25 Monsom Yehowa mo Nyankopɔn,+ na obehyira mo aduan ne mo nsu so.+ Meyi ɔyare afi mo so.+ 26 Ɔbea biara nni w’asaase so a obenyinsɛn apɔn,+ na obiara renyɛ obonin wɔ w’asaase so. Mɛma moanyin akyɛ.* 27 “Medi kan ama me ho hu atɔ wɔn so,+ na mɛma nnipa a wobɛkɔ wɔn nkyɛn no nyinaa ani so atan wɔn. Mɛyɛ ama w’atamfo hu wo a, wɔde ahopopo aguan.*+ 28 Ansa na wubedu hɔ no na mama wɔabotow,*+ na ɛbɛma Hiwifo ne Kaananfo ne Hitifo aguan afi w’anim.+ 29 Merempam wɔn mfi w’anim afe baako pɛ mu, sɛnea ɛbɛyɛ a asaase no renna hɔ kwa,* na mmoa a wobetumi adi wo awu annɔɔso wɔ so.+ 30 Mɛpam wɔn nkakrankakra kosi sɛ w’ase bɛtrɛw na woafa asaase no.+ 31 “Asaase a mede bɛma wo no befi Ɛpo Kɔkɔɔ no ano akosi Filistifo po no ano, na asan afa sare no so akosi Asubɔnten no* ano.+ Na mede asaase no sofo bɛhyɛ wo nsa na woapam wɔn afi w’anim.+ 32 Ɛnsɛ sɛ wo ne wɔn anaa wɔn anyame yɛ apam biara.+ 33 Mma wɔnntena w’asaase so sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrentwetwe wo mma wonyɛ bɔne ntia me. Sɛ wosom wɔn anyame a, sɛnea ɛte biara ɛbɛyɛ afiri ama wo.”+
^ Anaa “na nni nnipa dodow akyi.”
^ Anaa “ɔbɔnefo mfa ne ho nni.”
^ Anaa “munim sɛnea ɔhɔho nkwa (kra) te.”
^ Nt., “w’afenaa babarima.”
^ Wɔsan frɛ no Nnawɔtwe Afahyɛ anaa Pentekoste Afahyɛ.
^ Anaa “Mɛma moadi nna amee.”
^ Anaa “wɔbɛdan wɔn atiko akyerɛ wo.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔabɔ hu.”
^ Anaa “rennan amamfo.”